स्कुल समायोजन, उल्टो परिणाम | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
स्कुल समायोजन, उल्टो परिणाम
दुई वर्षमा ३२ स्कुल गाँभ्दा विद्यार्थी र अभिभावकलाई सास्ती, संस्थागतलाई फाइदा
२०७६ भाद्र १०, मंगलवार १२:४१ गते
किशोर खनाल / चितवन :
-चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ को आधारभूत विद्यालय सिसैलाई कपरखोरी माविमा गाभेपछि पहिलेको स्कुलनजिक घर भएका बालबालिका बेलैमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
-चितवनकै भरतपुर महानगरपालिकाले आधारभूत विद्यालय शान्तिपुरलाई आधारभूत विद्यालय हनुमाननगरमा समायोजन गरेपछि नजिकका निजी स्कुललाई फाइदा पुगेको छ ।
-चितवनकै राप्ती र कालिकामा रहेका विद्यालय अरु विद्यालयसँग गाभिँदा शिक्षक र कर्मचारीको जागिर खोसिएको छ भने अभिभावकले आप्mना छोराछोरीलाई टाढाको स्कूल पठाउन गाडी भाडा तिर्नु परेको छ ।
चितवनकै माडी नगरपालिकामा १२ वटा विद्यालय गाभिँदा तिनका करोडौं रुपैयाँका भौतिक संरचनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।
-चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाका ७ वटा स्कूल गाभिँदा विद्यार्थीहरु घन्टौँ टाढाको अर्को स्कूल जानु पर्दा विद्यार्थीहरु कोठा भाडा तिरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।
आधारभूत शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा आएपछि बितेका दुई वर्षमा चितवनका सातवटा स्थानीय सरकारले ३२ वटा स्कुल अर्काे स्कूलमा गाभेका छन् । चितवनको माडी नगरपालिकामा १२, इच्छाकामना गाउँपालिकामा ७, राप्ती नगरपालिकामा ५, रत्ननगर नगरपालिकामा ३, कालिका नगरपालिकामा ३, भरतपुर महानगरपालिकामा १ र खैरहनी नगरपालिकामा १ विद्यालय गाभिएका छन् ।
विद्यालय गाभ्दा निर्देशिका मिचिएको छ । शिक्षा विभागको विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० अनुसार नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभ्न सकिने छ ।
निर्देशिकामा १ देखि ५ कक्षासम्म चलेका विद्यालयमा विद्यार्थी एक सय भन्दा कम रहेछन् भने त्यो विद्यालयलाई हिँडेर ३० मिनेटसम्म पुग्न सकिने खण्डमा अर्को विद्यालयमा गाभ्न सकिने उल्लेख छ । तर भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर वडा नम्बर १४ को १२० जना विद्यार्थी भएको आधारभूत विद्यालय शान्तिपुरलाई आधारभूत विद्यालय हनुमाननगरमा गाभेको छ ।
‘नगर कार्यपालिकाको बैठकले विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । आधारभूत विद्यालय शान्तिपुरले बस खरिद ग¥यो, खर्च धान्न सकेन र केही विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि आधारभूत विद्यालय हनुमान नगरमा समायोजन गर्न परेको हो,’ भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत बाबुराम दवाडीले भने । उनका अनुसार त्यो विद्यालयलाई सक्षम बनाउन लाग्नुभन्दा समायोजन गर्न ठीक देखियो ।
स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाका शाखाअधिकृतहरुले यसरी स्कूल गाभिँदा राम्रो परिणाम आएको दावी गरेका छन् तर यसरी स्कूल गाभ्दा कहिँ पनि राम्रो परिणाम देखिएको छैन ।
यसरी स्कूल गाभिँदा भौतिक संरचना अलपत्र परेको छ, विद्यार्थीहरुले पढ्नका लागि टाढाको स्कुलमा जानु परेको छ । ससाना केटाकेटी समयमा स्कूल जान सकेका छैनन् ।
अन्ततः गाभिएको आधारभूत विद्यालय शान्तिपुरमा अहिले नेपाल प्रहरीको स्कूल चलाइएको छ । महानगरले प्रहरी स्कुल चलाउनकै लागि सो विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभेको देखिन्छ । यसो गर्दा निजी स्कूललाई फाइदा भएको छ । यस स्कूलमा भर्ना भएका १२० जना विद्यार्थीमध्ये ५० जनालाई नेपाल प्रहरीको स्कुलमा ठाउँ दिइएको थियो तर ३२ जनामात्र विद्यार्थी यो स्कुलमा गए ।
भरतपुर १४ का वडाध्यक्ष ओमप्रकास पोख्रेलका अनुसार केही विद्यार्थी गाभिएको स्कूलमा गए भने करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी नजिकका निजी स्कुलमा समेत पुगे ।
वास्तवमा योभन्दा बढी विद्यार्थी निजी स्कूलमा गए । आधारभूत विद्यालय हनुमाननगरका प्रधानाध्यापक शिव तिवारीका अनुसार त्यहाँ गाभिएको स्कुलबाट ३५ जना विद्यार्थीमात्र गाभिएको स्कूलमा गए । ‘यस हिसाबले हेर्दा ५३ जना विद्यार्थी केही निजी स्कूलमा गए, केहीे दुरी टाढाको सामुदायिक स्कुल जान बाध्य भए’ प्रधानाध्यापक तिवारीले भने ।
गाभिएको स्कुलमा गएका विद्यार्थीहरुले स्कूल जान गाडी भाडा तिर्नु परेको छ । स्कूल जानआउनमा उनीहरुले पहिलेभन्दा बढी समय खर्च गर्नु परेको छ । भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका नगर शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले समायोजन गर्दा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी गए भने त्योभन्दा ठूलो अपराध केही हुँदैन भने । तर उनकै महानगरपालिकाले गाभेको स्कूलका झण्डै आधा विद्यार्थी निजी स्कूलमा गएको कुरातिर उनको ध्यान पुग्न सकेन ।
दुरी टाढा हुँदा समस्या
यस्तै रत्ननगर नगरपालिकाले चित्रसारी माविमा गाभेको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मनहराका विद्यार्थी चित्रसारी मावि गएको दावी सो नगरपालिकाका शाखा अधिकृत राजेन्द्र बरालले गरे । तर सो स्कूल रहेको वडा न ८ का वडाध्यक्ष विनोद बस्नेतले केही विद्यार्थी निजी स्कूल पनि गएको बताए ।
रत्ननगर नगरपालिकाले दुई वर्षमा तीन वटा विद्यालय गाभेको छ । नगरपालिकाले वडा नं ९ को आधारभूत विद्यालय सिसैलाई कपरखोरी माविमा गाभ्यो । यसले गर्दा आधारभूत विद्यालयछेउको बस्तीका चेपाङ समुदायलाई मर्का परेको छ । त्यहाँका १५ जना बालबालिकाले अहिले कपरखोरी माविमा जानुपर्ने भएको छ । कपरखोरी जाँदा खगेरी खोला जँघार तरेर जानुपर्छ ।
यसले गर्दा पुरानो स्कूल छेउको बस्तीमा बस्ने, नेपालको सिमान्तकृत समुदाय चेपाङका बालबालिका मर्कामा परेका छन् ।
‘सानो छोरा जँघार तरेर स्कूल जान सक्दैन । स्कूल पठाउँदा खोलामा डुबेर केही हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ । त्यसैले भर्ना गर्ने उमेर पुगे पनि स्कूल भर्ना गरेको छैन’ वीरबहादुर चेपाङले भने । नयाँ स्कूल पुग्न कलिला विद्यार्थीले खोला तरेर झन्डै अढाइ किलोमिटर हिँडनुपछ्र्र ।
सोही टोलकी निरु चेपाङले बाध्य भएर आप्mना दुईजना छोराछोरीलाई नयाँ स्कुल पठाएकी छिन् । ‘डराइ डराइ छोराछोरीलाई स्कुल पठाएकी छु । उनीहरु स्कूलबाट फर्केर नआएसम्म खोलामा केही भयो कि भनेर भित्रभित्रै छटपटी हुन्छ,’ उनले भनिन् । स्कूल गाभिएपछि निरुका दुई छोराछोरीले पढ्नलाई कपरखोरी मावि पुग्न परेको छ ।
‘पहिलेको स्कूल पुग्न पाँच मिनेट पनि लाग्थेन, अहिले आधाघण्टामा पनि पुग्न मुस्किल छ । खोला तर्दा गोहीले खान्छ कि, बर्खाको भेलले बगाउँछ कि भन्ने डर लाग्छ । खुकुरीको धारमा राखेर छोराछोरीलाई कतिन्जेल हिँडाउने ?’ निरुले भनिन् । छ महिना अघि खगेरी खोलामा गोहीले एकजना बालकलाई खाएको उनको मानसपटलमा अझै ताजा छ ।
पहाडका स्कूल टाढाटाढा हुने हुँदा राप्ती नगरपालिकाले स्कूल नगाभ्ने नीति लियो तर पहाडी भेग भएको इच्छाकामना गाउँपालिकाले दुई वर्षमा सातवटा स्कूल गाभ्यो ।
यसरी स्कूल गाभिएपछि विद्यार्थीले टाढाको स्कूल जानु परेको गुनासो अभिभावकहरुले गरेका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाले हिँडेर एक घन्टासम्म लाग्ने विद्यालय समायोजन गरेको छ । जसका कारण पढाउनकै लागि विद्यार्थीका अभिभावकले आफन्तका घर वा डेरा खोजेर राख्नुपरेको छ ।
इच्छाकामना ६ मा रहेको आधारभूत विद्यालय रैबुङलाई हिँडेर एक घण्टा लाग्ने विद्यालय राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय आधामारामा समायोजन गर्दा कति विद्यार्थीहरु मुग्लिन बजारतिर डेरा लिएर बस्नुपरेको त्रिवेणी बराह मावि मुग्लिनका शिक्षक युवराज लामा बताउँछन् ।
आधारभूत विद्यालय रैबुङका शिक्षिका मनिका चेपाङले इच्छाकामनामा भएका ७ विद्यालयको समायोजन दुरी टाढा भएका कारण नै विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समायोजन गर्न हुँदैन, भन्दाभन्दै समायोजन भएको छ ।’
इच्छाकामना गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख दुर्गादेवी खड्काले विद्यालय समायोजन गरेपछि आउने परिणाम निकाल्न स्थलगत रिपोटिङ नभएको बताइन् । ‘कसैको स्वार्थले समायोजन गरेको होइन, राम्रै होला भनेर राज्यको नीति अनुसार समायोजन गरिएको हो स्थलगत रिपोटिङ गर्दा उल्टो परिणाम आएको देखिए यस विषयमा सोच्नै पर्ने अवस्था आउन सक्छ’ खड्काले बताइन् ।
भवन, जग्गा अलपत्र
समायोजन भएका स्कुलका भवन र जग्गा अलपत्र छन् । यिनलाई प्रयोग गर्ने जिम्मा सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिइएको रत्ननगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘अहिल्यै त स्कुलको भवन प्रयोग गरिएको छैन, तर वडाले विस्तारै कुनै प्रयोजनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
गाभिएका स्कूलको भौतिक संरचना कसको अधिकारभित्र पर्छ भन्ने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छैन । तर नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले समायोजनपछि खाली भएका विद्यालयहरु हालसम्म कुनै उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
रत्ननगरको, तीन कक्षासम्म चलेको पार्वती राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको पाँच कोठे भवन त्यसै मिल्किरहेको छ । वडा नं ५ का वडाध्यक्ष कृष्ण महतोले भने, ‘भवन खाली छ । प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।’
रत्ननगरको वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष विनोद बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मनहराको भवन यत्तिकै रहेको छ । कसैले तोडफोड गर्लान भनेर एकजना कुरुवालाई तलब खुवाएर राख्नु परेको छ ।
चितवनमा सबैभन्दा धेरै स्कूल गाभ्ने नगरपालिका माडी हो । यस नगरपालिकाले दुई वर्षमा १२ वटा स्कुल गाभेर आफूलाई जिल्लाकै ठूलो बनेको दावी गरेको छ, तर माडी नगरपालिकाले समायोजन पछि अलपत्र बनेका सबै भवनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।
‘भवनलाई अलपत्र पारिनु हुँदैन, हामीले पार्दैनौँ विस्तारै प्रयोगमा ल्याउँछौँ’ माडी नगर पालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले दावी गरे ।
गाभिएका १२ वटा स्कुलका सामन्य मूल्यांकनमा एउटा स्कुलको भवनलाई ५० लाख मूल्यांकन गर्दा पनि ६ करोड रुपैयाँ बराबरका भवन प्रयोगमा ल्याउन जरुरी भएको माडीका शिक्षक सूर्य पंगेनीले बताए । भवन वडा कार्यालयलाई जिम्मा लगाइए पनि वडाहरुले ती भवन सदुपयोग नगरेका माडी नगरपालिका शिक्षा शाखाकी सरिता सापकोटाले बताइन् ।
कालिका नगरपालिकाले बितेका दुई वर्षमा गाभेका दुई वटा स्कूलका डेस्क—बेन्च र कुर्सी गाभिएका स्कूलमा पठाइए पनि भवन भने उपयोग नभइ बसेका छन् ।
गुणस्तर बढ्न सकेन
शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाका विचारमा सामुदायिक स्कुल गाभ्दा त्यहाँका विद्यार्थी संस्थागतमा गए भने सुखद् परिणाम नआउने बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय गाभ्नुभन्दा नजिकका संस्थागतका विद्यार्थी तानेर सामुदायिक विद्यालयलाई अझ बलियो बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
कालिका नगरपालिका वडा नं ५ को भीमोदय माविमाका प्रअ डा हरि कँडेल पनि स्कूल गाभ्दा शिक्षाको गुणस्तर नबढेको ठान्छन् । भीमोदयमा पनि एउटा स्कुल गाभिएर आएको छ । उनी भन्छन्, ‘उताका कमजोर विद्यार्थी यता आएपछि गुणस्तर कसरी बढ्नु ? स्कुल गाभ्नुभन्दा पहिले नै त्यस स्कूलका शिक्षक अन्त पठाइयो । लामो समयसम्म विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् ।’
उनले प्रश्न गरे, ‘स्कूल गाभिएपछि विद्यार्थीले टाढाको स्कूल जानुप¥यो । स्कुल पोशाक नयाँ किन्नुप¥यो । टाढाको स्कुल जाँदा गाडी भाडा तिर्नुप¥यो । यसो भएपछि स्कूल गाभ्ने कामलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ ?’
कँडेलका विचारमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा कति स्कूल चाहिन्छन भनेर हिसाब किताब नगरिकनै स्कूल गाभिएकाले यो काम असफल सावित भइसकेको छ । शिक्षाविद् सापकोटा पनि नक्शाकन गरेर मात्र विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
राप्ती नगरपालिकाको आधारभूत विद्यालथ हर्दी भण्डारा माविमा गाभिएपछि विद्यार्थी अनुष्का चौधरीले भनिन्, ‘हामीले नजिकको विद्यालयमा पढन् पाएनौँ गाडी चढेर टाढाको विद्यालयमा जान परेको छ, पढ्ने समय नै पुग्दैन । चाँडै भात खानुपर्छ । गाडी चढ्न त मजा हुन्छ ।’
शिक्षकको रोजीरोटी खोसियो
गाभिएका स्कूलमा स्थानीय स्रोतमा नियुक्ति भएका शिक्षकको जागिर गएको छ । कालिका नगरपालिकाका शान्ति अर्याल, गिरीधारी चौधरी र अन्जु चौधरीले झन्डै एक वर्षको तलब बुझ्न पाएका छैनन् । उनीहरुले तलबको लागि उजुरीसमेत हालेका छन् । कालिका ५ का वडाध्यक्ष जेएन महतोले तलब नपाएको भनेर कसैको उजुरी वडा कार्यालयमा नपरेको बताए । बरु नगरपालिका भने उजुरी परेको उनको भनाइ छ ।
‘नगरपालिकाले दिन्छौँ त भनेको छ, तर हालसम्म पाएको छैन,’ शिक्षक अर्यालले भनिन्, ‘जागिर गएपछि केही न केही काम त गर्नु त प¥यो, खाली हात बस्ने त कुरा भएन पुस्तक पसल चलाउँछु ।’
राप्ती नगरपालिकाको भण्डारा बजार नजिकैको आधारभूत विद्यालय हर्दीमा निजी स्रोतमा नियुक्त शिक्षक इन्दु चौधरीले भनिन्, ‘१० वर्ष ज्ञानको ज्योति छर्ने काम गरेँ । विद्यालय समायोजनले अहिले जागिर चट भयो ।’
उनले आफूलाई राप्ती नगरपालिकाले अन्याय गरेको बताइन् । ‘स्कुल समायोजन भएपछि हाम्रो पनि समायोजन गर्नुपर्ने थियो तर घर पठाइयो, रोजीरोटी खोसियो,’ उनले भनिन् ।
राप्ती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुमकान्त अधिकारीले निजी स्रोतका शिक्षक तथा कार्यालय सहायकहरुको जागिर गएको स्वीकारे ।
आधारभूत विद्यालय हर्दीका निजी स्रोतका अर्का शिक्षक पारसमणि चौधरीले भने, ‘११ वर्ष पढाएँ । अहिले जागिरबाट हात धोएर बस्नु परेको छ । हामी समस्या परेकामा छौँ । स्कुल समायोजनको काम हाम्रा लागि अभिसाप नै भयो ।’